कुन राशीका मानिस कति सेक्सी हुन्छन् ? - Deshko News Deshko News कुन राशीका मानिस कति सेक्सी हुन्छन् ? - Deshko News
कुन राशीका मानिस कति सेक्सी हुन्छन् ?
हामी सबैलाई थाहा छ कि एक व्यक्ति अर्काे भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई मखमली, सयपत्री, गुराँस आदि । कसैलाई नुनिलो बढी खान मनपर्छ भने कोही गुलियोको भोको हुन्छन्, कोहि अमिलोका पारखी पनि हुन्छन् ।
हो, यस्तै यौनका मामलामा पनि मानिसहरुमा अनेक गुण र व्यवहार पाइन्छ । कोही शारीरिक सम्बन्ध भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् भने कोही यसलाई खासै वास्ता गर्देनन् ।
कोही अनेर प्रकार आइटम प्रयोग गर्न रुचाउँछन् भने कोही पुरानै परम्परागत तरिका प्रयोग गर्दछन् । कसैलाई दिनभरी कामुक कुराकानी गर्न रुची हुन्छ भने कोही यसमा रुची देखाउँदैनन् ।
आखिर यस्तो किन हुन्छ ? ज्योतिषशास्त्र भन्छ, मानिसमा यौनिक व्यबहार फरक हुनुको कारण राशी हो । आउनुहोस् हेरौ ज्योतिषशास्त्र अनुसार कुन राशीका मनिसको सेक्स जीवन कस्तो हुन्छ ।